Arsene Wenger oo shaaciyey xili aan dheereyn oo ay Arsenal ka tagi doonaan Mesut Ozil iyo Alexis Sanchez? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Arsene Wenger oo shaaciyey xili aan dheereyn oo ay Arsenal ka tagi doonaan Mesut Ozil iyo Alexis Sanchez?
(12-10-2017) Macalinka kooxda kubada Cagta Arsenal Arsene Wenger ayaa shaaca ka qaaday Xiliga ay fasixi doonaan Cayaartoydiisa diidey in ay Saxiixaan heshiiska cusub ee kala ah Mesut Ozil iyo Alexis Sanchez .
Arsene Wenger oo qabtay shir Jaraa id ayaa sheegay in labadan Cayaaryahan ay bixi doonaan marka lagaaro bisha Janaayo oo uu dib u furmi doono suuqa kala iibisa Cayaartoyda qaarada yurub waxaana uu Cadeeyey in ay ka quusteen ka dhaadhicinta in ay Saxiixaan heshiis cusub.
Mesut Ozil, iyo Alexis Sanchez ayaa la malaynayaa in ay u guuri doonaan Magaalada Manchester kana soo kala jeesan doonaan labada kooxood ee ka dhisan Magaaladaas ee Manchester United iyo Manchester United waxaana Mesut Ozil uu doonayaa in uu markale la midoobo Macalinkiisii hore ee Jose Mourinho halka Alexis Sanchez uu isna la midoobi doono Macalinkiisii hore ee Pep Guardiola.